Professor U Aung Khin,atowering Myanmar Muslim Scientist – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on July 4, 2011 by kyawkyawoo	Posted in towering Myanmar MuslimsTaggedatowering Myanmar Muslim Scientist, တက္ကသိုလ် မွတ်စလင်မ် လူငယ်များအသင်း, ဓာတုဗေဒပါမောက္ခ ဦးအောင်ခင်, ပါမောက္ခ ဦးအောင်ခင်, သံတွဲမြို, ဦးသန်းတင်B.A. B.L (Advocate), ကျော်ကျော်ဦး, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, islam, islam. burmese muslim. myanmar muslim, myanmar muslim minority, Professor U Aung Khin, religion, towering Myanmar Muslims
မျိုးဆက်သစ်တက္ကသိုလ် မွတ်စလင်မ်ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းသားဟောင်းကြီးများ ခင်မင်ရင်းနှီးစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၁၉၅၉
ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းသော တက္ကသိုလ် မွတ်စလင်မ် လူငယ်များအသင်းတွင် ကထိက ဆရာကြီး ဦးအောင်ခင်သည် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ထိုနှစ် အမှုဆောင်များမှာ –
ဦးသန်းတင်B.A. B.L (Advocate)